Zavatra Miavaka Indrindra atao, Amsterdam | Save A Train
Home > Travel Europe > Zavatra Miavaka Indrindra atao, Amsterdam
Na dia mitsidika Amsterdam voalohany na niverina mba hijery ny tsara tarehy indray lakandrano, dia te-hahalala ny momba ny indrindra tsy manam-paharoa ny zavatra atao, Amsterdam! Raha toa ianao ka vonona ny hitady niainany tany an-dafin'i Damrak Avenue in Amsterdam, lisitra io no hahatonga ny tena mahagaga getaway!
Zavatra Miavaka Indrindra Ny manao In Amsterdam: Ankafizo Avo Tea House amin'ny kely indrindra In Amsterdam
Inona no mety ho mahafatifaty sy tsy manam-paharoa kokoa noho ny manana Afternoon Tea in Amsterdams kely indrindra House? Eny, izany tena mifanaraka amin'ny indrindra tsy manam-paharoa ny zavatra atao, Amsterdam volavolan-dalàna! Ity trano madinika ao amin'ny iray amin'ireo faritra tranainy indrindra Amsterdam ihany 2 metatra ny sakany. Tena aina ny tompon-javatra eo amin'ny fiainam-baovao ho any amin'ny fananana taloha: indray mandeha ny trano antonona fianakaviana dimy! Tsy mampino tahaka izay, izay ihany no iray amin'ireo tantara izay miandry anareo ao tsara tarehy ity tearoom.
Ny rihana voalohany dia Cozy fivarotana dite kely, raha ny faharoa sy ny fahatelo rihana vonona ny miarahaba anareo tonga soa ny dite Nafangarony Fairytale. Maro ny safidy ho an'ny sakafo maraina, odiambavafo, dite avo, ary na dia sakafo atoandro. Efa ao amin'ilay kely indrindra House indroa: indray mandeha noho ny sakafo maraina mba mahafinaritra izay aho tara adiny iray (izay tsy ny tsara indrindra andro), ary ny iray vao haingana indrindra ho Afternoon Tea amin'ny rantsan-mofo voasesika, telo samy hafa pies, ary scones ka matsiro fa rehefa ny miaramila miantra nanolo-tena hitondra zavatra izy miaraka amintsika, Tsy nisalasala izahay. Tea izahay ny tolakandro dia nisafidy priced amin'ny 25 EUR isan'olona, raha ny Avo Tea dia 35 EUR.
Zavatra Miavaka Indrindra Ny manao In Amsterdam: Hitety ny maso Filmmuseum
Rehetra ny slick trano maoderina any Amsterdam, dia ny maso Filmmuseum izay mijoro avy. Miaraka amin'ny tsara tarehy, tsipika fotsy mamirapiratra mamelatra nanaraka ny Reniranon'i IJ tandrifin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby. Ny maso tokoa an-tampon'ny zavatra tsy manam-paharoa ny tena atao ao Amsterdam lisitra. Ny tena zava-dehibe dia sarimihetsika, amin'ny efijery maromaro manolotra isan-karazany ny fivavahana sy ny sarimihetsika malaza. Misy, na izany aza, mihelina ihany koa tsy manam-paharoa kanto fampirantiana ary asa atao ho an'ny ankizy, miampy miavaka tsara hevitra niverina nankany afovoan-tanàna. Koa nafenina intsony eto, sy maharitra miseho, dia fahita firy ny fiotazam-boalobok'i cinematic sarimihetsika any Jean Desmet, izay mampiaraka indray hatrany 1907. Raiso sakafo antoandro eto, koa: ny kafe bara aloha taha.
Discover Ny Museum Of Bags sy ny poketra
Rihana telo ny fahagola sy ny ankehitriny na poketra, anaty fitoeram-bola sy ny mpanjifany manao ny Tassenmuseum Hendrikje ho iray amin'ireo Amsterdam indrindra tsy mahazatra sy manintona manintona. Immaculately aseho amin'ny antitra tsara tarehy trano izy, Anisan'ny nisongadina Art Nouveau sy Art Deco sekely, iray manontolo kabinetran'ny tsy fahita firy sy marevaka taona 1950 mafy poketra vita amin'ny plastika ho faran'izay tsotra sy amin'ny teny Perspex (-pahamendrehana mampiahiahy) Vintage poketra vita amin'ny biby. Mihelina ankehitriny fampirantiana ny harona sy ny poketra manodidina ny famoriam-bola.
Raha iray amin'ireo zavatra tsy manam-paharoa ny tena atao, Amsterdam ahitana ahy ny fahazoana ny biby fiompy ny biby mahafatifaty, dia samy manao ahy amin'ny! Mandehana eo ary mitsidika ny tena malaza catboat! Yep, mamaky izany zo izany! Na dia tsy rano saka matetika mihitsy ny vola lany, ny felines na ny Poezenboot, fa toa tena ao an-trano eo amin'ny fitoerana masina mitsingevana. Izany dia biby fitoerana masina mitsingevana eo amin'ny lakandrano eo amin'ny Amsterdam. Ary nisy naorin'i Henriette Van Weelde in 1966 toy ny trano ho an'ny nania, marary, ary niala felines, ary efa nanomboka nitombo lasa ofisialy fiantrana.
Ny Tranosambo accommodates hatramin'ny 50 saka indray mandeha, 14 ny izay maharitra mponina. Human ny mpitsidika no tonga soa ny sambo ihany koa. Maro no tonga hifidy ny saka ny fananganan-jaza, fa ny mpizaha tany ihany koa ny mandray handao sy rangotra, ratra kely ny Kitty ambadiky ny sofina.
Tahaka ny ny fitiavana, ny sambo mijanona mitsinkafona fitoerana masina noho ny fanomezana sisa ny mpitsidika. Natsangana ny vola rehetra mandeha amin'ny manampy na iza na Amsterdam saka araka izay azo atao. Ny Cat Boat Foundation mandoa ny neutering ny saka izay tompony tsy afaka manam-bola fikarakarana fitsaboina momba ny biby, ary koa ny very. Mpiasa an-tsitrapo hikarakara ny saka, ny sasany izay efa nandray ny mpitsidika. Ny saka dia nino hanitsy ny fiainana eto an-tany tanteraka tsara ao an-tranony vaovao.
Mandehana Plastic Fanaratoana nandritra ny Unique Tour Of Amsterdams Lakandranon'i
Going plastika Fanaratoana teo Amin'ny Amsterdam lakandrano dia iray amin'ireo zavatra tsy manam-paharoa ny tena atao ao Amsterdam azo antoka! Ary aoka aho hilaza aminareo, dia tena toy izany toa. Ny fandraisana an-tanana ny tontolo iainana namana miaraka tsiroaroa amin'ny fizahantany ny asa atao amin'ny Plastic trozona, ny 2 ora sambo diany tena mamonjy roa mahafinaritra sy tsara tarehy tianao. Rehefa dingana an-tsambokely, mahazo anao manokana harato, ary ho afaka aminareo handeha!
Ny tsara indrindra angamba fa raha sambokely hafa Tours sambo taloha araka ny efa voafaritra mialoha lalana, mahazo handeha na aiza na aiza no mamantatra ny zavatra tapa-plastika. Raha ny fandehany ho mifaninana I Spy lalao izay rehetra dia faran'izay vola amin'ny fitadiavana olona na dia ny kely indrindra potika harona plastika. Ny tena rehefa misy olona Mitranga ny fankalazana ny siny hoditra harambato voasaron-drano eo akaikin'ny sisiny ny lakandrano. Toy ny kapiteny Hitarika ny sambo mba hifanaraka eo anelanelan'ny sambo miantsona, ianao zoro ny sandriny sy tamim-pandresena avy hamono ny mpanakorontana! Aoka ianao ho vonona hiresaka momba ny weirdest haben'ny ny andro ary koa ny mihomehy sy ny fifamatorantsika amin'ny mpandeha hafa.
Mino aho fa io zavatra niainako io dia tena very maina ny mbola, ary manome fomba tsy mahazatra mba hiaina ny Amsterdam lakandrano. Ho hifindra betsaka tsy mahazo reraka, ary indray mandeha ny fitetezam-paritra dia ny, dia dingana avy teo an-tsambokely tamin'ny ny fahatsapana ny zava-bitany ihany koa. Izay rehetra for fotsiny 25 EUR.
Ny fitetezam-paritra Woonbootmuseum
Raha toa ianao ka mbola nanontany tena hoe manao ahoana izany ny hiaina ao amin'ny iray amin'ireo Amsterdams tranosambo, izany no fahafahana hamantatra. Ao amin'ny lisitra ny zavatra tsy manam-paharoa indrindra tokony hatao ao Amsterdam, dia afaka hanao izany! Ny tompony dia sariaka ary efa nanokatra ny mahazatra Tranosambo, izay natomboka tamin'ny 1914 toy ny freighter ny fasika sy vatokely talohan'ny niova fo tamin'ny taona 1960. Mpitsidika dia afaka Manitsy moramora raha nandeha nitety ny faritra velona Cozy, izay vitsivitsy ny fanazavana takelaka manome ny ambany eo amin'ny fiainana Tranosambo. Ny tompony Tsy irery; efa ho 3,000 sambofiara sy ny tranosambo dia plugged ho any Amsterdams mandatsa-dranomaso sy ny tambajotra herinaratra. te hahafanta-javatra afa-po, dia afaka fandehandehanana eny an-dalambe ny tena tsara fananganana fisakafoana, Restaurant aotirisy.
Zavatra Miavaka Indrindra Ny manao In Amsterdam: Raiso An Audio Tour alalan'ny Tuschinski Theater
Fantaro ny tantara ao ambadiky ny manaitra Tuschinski Theater. Ary ny miasa sinema, ny Theatre amin'ny Reguliersbreestraat dia ampahany amin'ny vondrona Pathe. Ny lafin-trano ivelany manam-paharoa dia fifangaroana ny zavakanto sy ny zavakanto deco Nouveau. Noforonina ny asa Tuschinskis ny maritrano Hijman Luis de Jong. Fa tahaka ny tsara tarehy tahaka ny lafin-trano ivelany dia, ny sinema lehibe indrindra efitrano dia tena teatra ary tsy misy na inona na inona tena toy ny mahafatifaty toy ny mijery ny toerana tena film volory mena seza.
Ny teatra manome isan'andro peo Tours fa fanombohana eo 09:30 ary 11:30. Ny fitetezam-paritra tsy ampy amin'ny teny anglisy sy holandey. izany maharitra 45 minitra sy ny vola lany 10 EUR, izay ahitana ny dite na kafe. Misy fitsidihana fitarihana koa azo alaina vondrona lehibe manomboka amin'ny 15 olona. To boky, Takelaky ny serasera mba rondleidingen.tuschinski@pathe.nl.
Raha te-hahazo ny tantara an-tsehatra Ambiance, dia afaka maka jereo kely ny sarimihetsika nomanina projections. Any no hahita fampisehoana hafa ao amin'ny tranonkala Pathe. Hankafy ny fampisehoana ao amin'ny tsara tarehy teatra toerana, Jereo ny horonan-tsary ao amin'ny Hall Lehibe. Indraindray, dia mety ho velona ihany koa fampisehoana.
Zavatra Miavaka Indrindra atao, Amsterdam: Aoka Ianareo ho nisy sisa afaka Room Adventure In Rijksmuseum
Tamin'ny vanin-taona mafana ny 2018 Rijksmuseum nandefa ny zava-natao ho voafetra fahavaratra manokana. Tsy manam-paharoa izao Escape lalao experahoence ary ao amin'ny lisitra ny zavatra tsy manam-paharoa indrindra atao, Amsterdam sy mitranga ao Amsterdams malaza indrindra mozea. Na izany aza, dia toa am-boalohany fa rehefa avy ny fahombiazana, ny fikatsahana ny hijanona eto. Ny zava-nitranga Maharitra malala-tanana 1.5 ora ary tena dia misarika ho any amin'ny habakabaka. Ianao hanara amin'ny raikipohy Hita Ihany Ilay nangalatra avy amin'ny taonjato faha-18 amin'ny alalan'ny boky sy ny mpanao ody Italiana alchemist Alessandro Cagliostro.
Ny Tontolo ihany Museum feno fanoloran-tena ny fahagagana Fluorescence
Amsterdam malaza Anne Frank House no tena akaiky ny tranombakoka kely io natokana lavitra kokoa psychedelic zavatra izay antony lehibe iray hoe nahoana no iray amin'ireo zavatra tsy manam-paharoa indrindra atao, Amsterdam!
Nanana sy niasa ny pony vorompano mpanakanto Nick Padalino. Electric Ladyland dia tena an-tampon'ny zavatra tsy manam-paharoa ny tena atao ao Amsterdam lisitra. Mety ho hita ambanin'ny atao hoe eny an-dalana toy izany koa haavon'ny zavakanto Gallery, Electric Lady. Electric Ladyland dia izao tontolo izao voalohany (ary toa afa-) tranom-bakoka mifantoka fotsiny amin'ny ody ny fluorescent ny fahazavana.
Vonona ny handeha sendra nanao dia tsy nandeha, Enga anie ka betsaka kokoa mahaliana? Hahatratra ny mitaingina amin'ny Save A Train! Tsy misy miafina sarany, mora fotsiny ny!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Zavatra Miavaka Indrindra atao, Amsterdam” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-unique-things-amsterdam/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#Amsterdam diany #UniqueAmsterdam travelamsterdam travelnetherlands